Nidaamka xiritaanka raadiyaha waa nidaamka keydka cufnaanta sare ee iswada otomaatiga u ah. Waxaa loo qaabeeyn karaa inuu noqdo LIFO (isku xirka iyo iskudhidda isla isla'eg) iyo sidoo kale FIFO (iskudhac hal dhinac iyo ka degidda dhinaca kale).
Nidaamkan keydka ee sumcadda leh oo wata gawaarida xamuulka qaada, qaybta rarida waxaa dhaqaajiya xamuulka gudaha kanaalada, sidaa darteed ka horjoogsanaya in xamuulka qaada kor u qaadku ku socdo dhismaha.
Nidaamkani wuxuu ka kooban yahay looxyo ruxmaya oo ay ku biireen alwaaxyo taageeraya biraha, kuwaas oo u adeega inay keydiyaan meelahooda qoto dheer iyo dhaqdhaqaaqa xamuulka. Gaariga wuxuu si iskiis ah ugu dhaqaaqayaa xarkaha tareenka, oo wuxuu ku ridayaa culeyska meesha u dhiganta.
Sababta oo ah xaqiiqda ah in xamuulka wiishku uusan u baahnayn inuu ku dhex ordo qaabdhismeedka, waqtiyada xayiraadda waa la yareeyaa, taasoo kordhineysa awoodda kaydinta qoto dheer. Khatarta shilalka shilalka ama waxyeellada ka dhalan doonta si weyn ayaa loo dhimay, shaqaalaha bakhaarrada ayaa kor u qaada dhaqdhaqaaqooda oo hawlgallada bakhaarka ayaa si aad ah loo habeeyay.
Qalabka Raadiyaha Raadiyaha, Nidaamka Xiritaanka Raadiyow, Rackings Rackings, Pallet Runners, Nidaamyada Xariga Raadiyaha Raadiyaha, ASRV, Pallet Rackings, Rackings Raging, Warehouse Rackings ack Rackings Riftings, Pallet Runners, Qalabka Sida Raadaalka Raadiyaha, ASRV, Raayadaha Raayadaha, Xariga Raadiyaha Rackings, Rakooyinka Rakeetka Raadiyaha, Pallet Runner, Pallet Mole, Gawaarida Raadiyaha Raadiyaha, Koronto Wireless Remote Control Pallet Runner, Nidaamka Masaafada, Pallet Shutter, Pallet Shuttle Rack, Rikoodhlada Riftings, Rikoodhka Satalaytka, Xawaaladaha Satalaytka, Rikoor Sateliko, Rasaasta Satalaytka , Rackings Satellite, Rikoodhka Satalaytka Dayax gacmeedka, Xirmooyinka Saamiga Dayax gacmeedka, Xirmooyinka Saameynta Dayax gacmeedka, Xirmooyinka Satalaytka, google, bing, yandex
Faa'iidooyinka Nidaamka Raadinta Shuttle
Wadaadku wuxuu qaban karaa howlo kale halka gaariga xamuulka ahi uu qeybta rarka dib ugulaabo kanaalka, taasoo kordhineysa wax soo saarka.
Isticmaal 100% goobaha kaydinta iyo ilaa 90% dusha bakhaarka, adigoo yareynaya waqtiga shaqada marka la barbar dhigo nidaamka wadis-gelinta caadiga ah.
Soo-saaris dhexdhexaad ah / sare.
Hal xarun oo SKU ah.
Dhacdooyin aad u yar ayaa ah sababta oo ah xamuulka qaada wiishashku uusan soo galin dariiqyada burburay
Xalka xamuulka ee ay bixiso Noega Nidaamku waa xalka guud oo loo isticmaali karo in lagu qaado gawaarida gawaarida ee soo saare kasta.
Nidaamka loo yaqaan Nidaamka Furitaanka Raadiyaha
Xalkan ayaa ah mid si otomaatig ah uga kooban iskudhaf ka kooban qaybo ka mid ah qaababka caadiga ah ee loo yaqaan 'pallete racking' iyo nidaamka wadista, oo ay ku shaqeeyaan gaari xamuul oo dhaqaajiya qaybaha rarka ee marinnada.
Gaariga waxaa lagu xukumaa koontaroolka fog, waxaa lagu qaadaa gaari xamuul ah oo waxaa lagu shubaa heerka iyo safka loo baahan yahay. Marka xamuulka lagu dhejiyo cutubka xamuulka ee saaran, wuxuu kor u qaadayaa saldhiga oo wuxuu ugu dhaqaajiyaa kanaalka. Adigoo adeegsanaya dareemayaasha iyo akhristayaasha, pallet-ka waxaa lagu meeleeyay meesha saxda ah. Howlgalkan ayaa ka hor istaagaya in wiishka xamuulka qaada uusan ku dhicin meesha la ordo, maaddaama ay tahay tan la xiriirta nidaamyada wadista wadista.
Xargaha waxaa lagu taageeraa qaabdhismeedka, oo lagu aaminay haammada. Qaab dhismeedka ayaa loo qaabeeyey iyada oo la tixgalinayo culeyska gaariga xamuulka ah iyo xoogaga u gaarka ah ee ay sababaan dhaqdhaqaaqa iyo barokaca qaybta xamuulka.
Qalabka Birta , Suuqa Suuqa , Wadada Shanaad , Xarig , Asal aamisan , Xidhitaanka lakabyo Badan ,